OTU ESI EWEPỤ MMELITE WINDOWS 10 NA FAỊLỤ HA SITE NA AKARA IWU, IHICHAPỤ OCHIE, NA-ADỊBEGHỊ ANYA, NBUDATA NA NTINYE ARỤNYERE SITE NA IJI MMEMME, YANA KPOCHAPỤ LOG - WINDOWS - 2019
Wepụ mmelite na Windows 10
Sistem nweta nkwalite - mkpa ma ọ bụ overkill? Usoro eji arụ ọrụ nke nche elekere Switzerland ma ọ bụ ihe na-agba chaa chaa nke data? Mgbe ụfọdụ, enwere ọnọdụ mgbe ọ dị mkpa iji wepu mmelite, nke, na tiori, kwesịrị ime ka ọrụ Windows 10 ma ọ bụ usoro ndị ọzọ guzosie ike. Ihe kpatara ya nwere ike ịdị iche, bụrụ nwelite arụnyere na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ enweghị njikere ime mgbanwe iji chekwaa ohere na diski ike.
Otu esi wepu ihe mmelite arụnyere ọhụrụ na Windows 10
Foto Foto: njehie mgbe ị na-etinye nkwalite Windows 10
Iwepụ mmelite site na "Ogwe njikwa"
Iwepụ mmelite site na Windows Update
Ihichapụ mmelite site n'usoro iwu
Otu esi ehichapụ folda ahụ na mmelite Windows 10
Otu esi tufuo melite Windows 10
Video: otu esi kagbuo melite Windows 10
Esi ewepu ihe nchedo Windows 10
Video: otu esi kpochapụ oghere nke Windows 10 mmelite
Mmemme maka wepụ Windows 10 mmelite
Ihe mere emeliteghị mmelite ahụ
Esi ewepu mmelite na-enweghị ekele
Ọ na-emekarị na os melite arụmọrụ OS dị njọ na arụmọrụ kọmputa. Nsogbu nwere ike ime n'ihi ọtụtụ ihe kpatara ya:
melite nwere ike tinye na njehie;
Mmelite ahụ anaghị akwado ndị ọkwọ ụgbọala na arụnyere maka arụmọrụ nke PC gị;
mgbe ị na-edozi mmelite, enwere nsogbu ndị kpatara njehie dị egwu na nkwụsịtụ nke sistemụ arụmọrụ;
melite bụ oge ochie, ọ bụghị arụnyere;
melite arụnyere ugboro abụọ ma ọ bụ karị;
e nwere njehie mgbe nbudata mmelite;
njehie mere na diski ike nke emelitela ya, na na.
Njehie nke mmebi nke nchekwa data "Windows Update"
Duplicate Windows 10 Mmelite na Mmelite Nwelite
Melite okpu n'ihi odighi ike diski ike
Mepee "Ogwe njikwa". Iji mee nke a, jiri aka nri pịa akara ngosi Windows na akuku aka ekpe nke ihuenyo wee họrọ "Ihe Njikwa".
Anyị jiri aka nri pịa "Malite" menu wee mepee "Ogwe njikwa"
Na windo nke meghere, n'etiti ihe edozi maka ijikwa OS gị, chọta ihe "Mmemme na components".
Na "Ogwe njikwa" họrọ ihe "Mmemme na Ngwa"
N'elu aka ekpe anyị na-ahụ njikọ "Lee mmelite arụnyere".
Na kọlụm ekpe, họrọ "Lee nwelite arụnyere"
Pịa na mmelite ị chọrọ. Ndabere bụ ịhazi site na ụbọchị, nke pụtara na mmelite ahụ ga-abụ n'etiti ndị dị elu, ma ọ bụrụ na arụnyere ọtụtụ nlele n'otu oge, ma ọ bụ n'elu, mgbe naanị otu arụnyere. Ya na mkpa ka ewepu ya, ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na ọ nwere nsogbu. Pịa bọtịnụ òké aka ekpe na mmewere, si otú ahụ megharịa bọtịnụ "Hichapụ".
Họrọ mmelite a choro site na listi ma wepu ya site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Kwenye nhichapụ ma malitegharịa kọmputa ahụ. Maka mmelite ụfọdụ, enweghi ike ịchọtaghachi ya.
Mepee menu Malite ma họrọ ihe Nhọrọ.
Họrọ "Nhọrọ" ihe site na ịmeghe menu "Malite"
Na windo nke mepee, họta gburugburu ebe obibi "Imelite na Nche."
Pịa na ihe "Imelite na Nche"
Na Windows Update taabụ, pịa na Ndekọ Njem.
Na "Windows Update" lee "Ndepụta Mmelite"
Pịa bọtịnụ "Hichapụ mmelite". Họrọ nwelite ịchọrọ mmasị na ihichapụ ya site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Pịa "wepu mmelite" wee wepu nkwalite na-ezighi ezi.
Mepee iwu ozugbo. Iji mee nke a, pịa aka nri "Malite" ma họrọ ihe "Usoro iwu (onye nchịkwa)".
Site nchịkọta nhọrọ nke bọtịnụ "Malite", mepee akara iwu ahụ
N'okwu mepere emepe, tinye akwụkwọ nkwekọrịta dị mkpirikpi / usoro: iwu table ma malite ya na bọtịnụ Tinye.
The wmic qfe ndepụta iwu nkenke / usoro: okpokoro egosiputa niile arụnyere mmelite site na tebụl.
Tinye otu n'ime iwu abụọ ahụ:
wusa / uninstall / kb: [melite nọmba];
wusa / uninstall / kb: [update number] / silence.
Kama [melite nọmba], tinye nọmba site na kọlụm nke abụọ nke listi ahụ, gosipụtara na akara iwu ahụ. Iwu nke mbụ ga-ewepu melite ma malitegharịa kọmputa ahụ, nke abụọ ga-eme otu ihe ahụ, ọ bụ naanị nzaghachi ga-eme ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
A na-ewepụ mmelite niile na ụzọ ndị yiri ya. Naanị ị ga-ahọrọ ụdị mmezi nke na-emetụtaghị os.
A na-akpọ folda anwansi ahụ WinSxS, emelite niile n'ime ya. Mgbe ogologo ndụ nke sistemụ arụmọrụ, ndekọ a na-aghọwanye na-agbakwụnye na data ndị na-adịghị ngwa ngwa ka ehichapụ. Ka a sịkwa ihe mere ndị ọkachamara ji ekwu, sị: Windows na-eburu kpọmkwem ohere dị ka enyere ya.
Ekwula onwe gị, na-eche na enwere ike idozi nsogbu a site na otu pịa na igodo Hichapụ. Mfe nhichapụ nke nchekwa na mmelite na ụdị ọ bụla nke Windows nwere ike iduga na arụ ọrụ sistemụ ahụ, mee ngwa ngwa, ghere oyi, jụ mmelite ndị ọzọ na "ọṅụ" ndị ọzọ. A ghaghị kpochapụ ndekọ a na ngwaọrụ nke sistemụ. Ọrụ a dị nchebe ga-enyefe ego kachasị elu.
E nwere ọtụtụ ụzọ iji bulie nchekwa nchekwa:
ọrụ "Cleanup Disk";
jiri akara iwu.
Tụlee ma ụzọ abụọ.
Kpọọ ọrụ dị mkpa iji iwu cleanmgr na akara akara ma ọ bụ na nchọpụta Windows, na-esote bọtịnụ Malite.
Iwu cleanmgr na-agba ọsọ ntanetị Clean Disk.
Na windo nke mepee, lelee ihe ndị a ga-ehichapụ na-enweghị emetụta ọrụ nke usoro. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụrụ na usoro nhicha nke diski adịghị enye iwepụ mmelite Windows, ọ pụtara na faịlụ niile dị na WinSxS nchekwa dị mkpa maka Os na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na iwepụghị ha ugbu a.
Mgbe ị chịkọtara data ahụ nile, ọrụ ahụ ga-enye gị nhọrọ maka ihicha disk ahụ.
Pịa OK, chere ruo mgbe ngwụsị nke usoro nhicha ahụ, wee malitegharịa kọmputa.
Ụzọ nke abụọ bụ ọbụna ngwa ngwa, ma ọ dịghị ọcha usoro dum ma ọ bụ diski ọzọ ma na-emekọ nanị na mmelite OS.
Mepee akara iwu (lee n'elu).
Na njedebe, tinye iwu Dism.exe / Online / Cleanup-Image / StartComponentCleanup ma kwenye njikarịcha na igodo Tinye.
Jiri Dism.exe / Online / Cleanup-Image / StartComponentCleanup iwu iji dozie nchekwa nchekwa
Mgbe otu a rụchaa ọrụ ya, ọ dị mma ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
O di nwute ma o bu ihe di nma, obughi mfe idozi mmelite Windows 10. Na ntọala dị mfe ị gaghị achọta isi nke ịjụ ịnweta mmelite ọhụrụ. A gaghị etinye ọrụ dị otú ahụ na "Ten" ahụ, n'ihi na ndị mmepe na-akwado nkwado ndụ ogologo oge maka usoro ihe a, ma mee ka ọ kwụsie ike. Otú ọ dị, egwu, nje ọhụrụ na "ihe mgbagwoju anya" dị otú ahụ na - apụta kwa ụbọchị - ya mere, ọ ga - emelite osịpụ osị gị na ha. Ya mere, a gaghị akwado ya iji gbanyụọ mmelite usoro ahụ, ọ bụ ezie na a ga-eme nke a n'ụzọ ụzọ.
Anyị jiri aka nri pịa akara "Kọmputa a" na desktọọpụ ma họrọ ihe "Management".
Site na ndepụta nke akara ngosi "Kọmputa a" gaa "Management"
Họrọ taabụ "Ọrụ na ngwa". Na ya anyị na-abanye "Ọrụ".
Mepee kọmputa "Ọrụ" site na taabụ "Ọrụ na Ngwa"
Pịgharịa site na ndepụta ahụ na ọrụ achọrọ "Windows Update" ma na-agba ya site na ịpị ugboro abụọ.
Mepee aha nke "Windows Update" abụọ pịa
Na windo mepere emepe, gbanwee ntan ahụ na kọlụm "Mbido" na "Onye nkwarụ", gosi mgbanwe site na bọtịnụ OK ma malitegharịa kọmputa.
Gbanwee "Ụdị mmalite" nke ọrụ ahụ "Onye nkwarụ", chekwaa mgbanwe ma malitegharịa kọmputa ahụ
Nhọrọ ọzọ iji kpochapụ ma kpoo usoro gị bụ iji kpochapụ faịlụ faịlụ echekwara. Nchekwa zuru ezu zuru ezu nwere ike imetụta arụmọrụ arụmọrụ, na-eduga nyocha mgbe niile maka mmelite ọhụrụ, wdg.
Nke mbụ, gbanyụọ ọrụ "Windows Update" (lee ntụziaka n'elu).
Iji "Explorer" ma ọ bụ onye njikwa faili ọ bụla, gaa na ndekọ ahụ n'okporo ụzọ C: Windows SoftwareDistribution Download na ihichapụ ọdịnaya niile nke folda ahụ.
Kọwaa ndekọ ebe eburu Windows Update Cache
Degharịa kọmputa. Mgbe ikpochapụ cache, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji mee ka ọrụ melite Windows.
Windows Update MiniTool bụ ihe omume n'efu na mfe-na-gọọmentị nke na-enyere gị aka melite gburugburu ebe obibi na Windows 10 na mmasị gị.
Windows Update MiniTool - mmemme maka ịrụ ọrụ na mmelite Windows
Ngwa a na-achọ mmelite ugbu a, nwere ike wepu ochie, reinstall upgrades na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ngwa ọrụ a na-enye gị ohere ịpụ na mmelite.
Revo Uninstaller bụ okwu dị ike nke Windows Add or Remove Programs service.
Revo Uninstaller - software maka ịrụ ọrụ na ngwanrọ software na os
Nke a bụ njikwa ngwa njikwa nke na-enye gị ohere ịchọta otú etu esi emelitekwa sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ngwa ọ bụla ewepụtara iche. Otu n'ime uru bụ ike ịmepụ mmelite na ngwa na listi, karịa otu n'otu oge, nke ga-ebelata oge maka ihicha ngwaọrụ gị. Na minuses, ị nwere ike ide ederede dị mgbagwoju anya na ndepụta ndepụta maka mmemme na mmelite, nke kewara na ọrụ Windows.
Imelite a enweghi ike wepu naanị n'ihi njehie ma ọ bụ ọtụtụ njehie nke mere n'oge nrụnye ma ọ bụ ọrụ nke melite ngwugwu. Windows abụghị ezigbo: ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ enwere nsogbu n'ihi ibu na OS, enweghị nchebe na netwọk, nje, ngwụrụ ngwaike. Dịka ọmụmaatụ, njehie dị njọ mgbe ị wụnye mmelite nwere ike ịbụ na ndekọ ebe edere data melite, ma ọ bụ na diski diski ebe a na-echekwa faịlụ melite.
Ụdị usoro maka ihichapụ "undelete" adịghị adị. Ọnọdụ nke ọnọdụ dị otú a pụtara na e nwere nnukwu njehie na ngwaọrụ gị nke na-egbochi sistemụ arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. O di nkpa iji uzo di iche iche dozie nsogbu a:
lelee kọmputa gị maka ọnụnọ nke mmemme nje na ọtụtụ mmemme nchebe;
mepụta nchọpụta zuru ezu nke diski ike na mmemme pụrụ iche;
na-agba ọsọ ndekọ nhichaa;
ihe ngbochi dikwa nkpa;
malite ọrụ mgbake Windows site na diski nrụnye.
Ọ bụrụ na usoro a niile emeghị ka ihe a chọrọ, kpọtụrụ ndị ọkachamara ma ọ bụ rụgharịa usoro sistemụ ahụ. Ọnụ ọgụgụ ikpeazụ, ọ bụ ezie na ọ bụ mkpụrụedemede, ga-edozi nsogbu ahụ.
Ịkwalite usoro ahụ abụghị nnukwu ihe. Otú ọ dị, iji nọgide na-arụ ọrụ kọmputa dị elu, ọ dị mkpa iji nyochaa mmelite ọ bụla na-abụ oge na nke ziri ezi.